सनराइज बैंकको पछिल्लो घटना: 'जनताको पैसामा सञ्चालकहरुको रजाइँ'
काठमाडौं, २५ माघ । आम सर्वसाधारणको निक्षेप रकममा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुुखहरुले कसरी रजाइँ गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरण सनराइज बैंकमा पछिल्लो समय भएको घटनाले देखाएको छ ।
साल्ट टे«डिङ लिमिटेड समेको प्रमुुख सेयर लगानी रहेको उक्त बैंकमा बैकका अध्यक्ष मोतिलाल दुुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, बच्छराज तातड, मालचन्द दुुगड, डा. दिपक प्रसाद भट्टराई, दिपक नेपाल, ज्योति कुुमार बेगानी, ओम कृष्ण जोशी समेतको सेटिङमा बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र डेपुुटी जनरल म्यानेजर रोविन नेपालले काठमाडौंको कमलपोखरीमा रहेको ५० आना जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार कमलपोखरीस्थित सनराइज क्यापिटल भवनसँगै जोडिएको उक्त ५० आना जग्गा वाङेगल लामाको नाउँमा दर्ता कायम रहेको छ । प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको प्रतिआना ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पर्ने देखिन्छ ।
तर बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुुखहरुले भने उक्त जग्गालाई माइन्युुटमा हस्ताक्षर गरेर दोब्बर मूल्य अर्थात् प्रतिआना एक करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार गत बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले कमलपोखरीस्थित उक्त जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा खरिदको लागि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक डा. भोगेन्द्र गुरागाईंले भने विमति जनाएका थिए । जनताको निक्षेपमा खेलबाड गर्दै करोडौँ रुपैयाँ मूल्यमा उक्त जग्गा खरिद गर्नुुहुँुदैन भन्दै गुरागाईले जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पछि अन्य सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरु समेतले गुरागाईंलाई जग्गा खरिद गर्नुुपर्ने कारण प्रष्ट पारेका थिए । साँध सिमाना मिलेका कारण नै बैंकले उक्त जग्गा महंगो मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले सबैले सहमति जनाएको जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णयमा तपाईंले पनि सहमति जनाउनुुप¥यो, सञ्चालकरुको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । सबैको प्रयासपछि अन्ततः गुरागार्इं पनि उक्त जग्गा किन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुुगेको दाबी समेत स्रोतले गरेको छ ।
उक्त जग्गा खरिदको लागि प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको मिलेमतोमा कागजी प्रक्रिया मिलाउने सम्पूर्ण काम डेपुुटी जनरल म्यानेजर रोविन नेपालले गरेका हुुन् । जग्गा खरिद प्रक्रियामा सुरुवाती समयमा विमति जनाउने गुरागाईं यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक)का पूर्वअध्यक्ष हुुन् । उक्त जग्गा खरिद गर्नको लागि बैंकको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुले खरिद कमिटी नै गठन गरेका छन् ।
जनताको निक्षेपमा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुले यसरी लुुट मच्चाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौन बस्दा बेइमानी गर्ने व्यक्तिहरुको मनोबल अझ उच्च भएको स्रोतले बताएको छ । सोही विषयमा कुुरा गर्दा बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुुगडले भने, ‘अहिले जग्गा किन्ने विषयमा त्यस्तो केही भएको छैन ।’
आफू अहिले काठमाडौंभन्दा धेरै टाढा रहेको भन्दै दुुगडले काठमाडौंको कमलपोखरी जस्तो ठाउँमा ४०÷५० लाख रुपैयाँ आनामा जग्गा नआउने भन्दै कम्तीमा पनि आनाको ६० लाख रुपैयाँ पर्ने बताएका छन् । आर्थिक दैनिकका साथमा ।